के कुराले गर्दा महिला पुरुषहरुप्रति बढी आकर्षित हुने गर्छन् ? – Everest Dainik – News from Nepal
के कुराले गर्दा महिला पुरुषहरुप्रति बढी आकर्षित हुने गर्छन् ?
के कुराहरुको कारण महिलाहरु पुरुषहरुसँग बढी नजिक हुनु वा आकर्षित हुन्छ त ? भन्ने गरिएको अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेका छन्– महिलाहरू पुरुषहरूको अनुहारलाई भन्दा व्यवहारलाई नोटिस गर्छन् ।
महिलाहरू कुन कुराले प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुरा धेरै पुरुषहरू जान्न चाहन्छन् । कसैलाई लाग्छ, महिलाहरू पैसा र प्रसिद्धिबाट प्रभावित हुन्छन् । कसैको विचारमा महलिाहरू पुरुषको अनुहार तथा फिटनेसलाई बढी महत्व दिन्छन् । यस्तो सोच छ भने त्यागौं है पुरुष मित्रहरू, अध्ययनले भन्छ– महिलाहरू पुरुषहरूको हाउभाउ, स्टाइल म्यानर्स एवं परिपक्वताबाट प्रभावित हुन्छन् ।
यस्तो छ वास्तविकता महिला पुरुषहरुप्रति अाकर्षित हुने ?
महिलाहरू पुरुषले आफ्नो साथी, परिवार एवं आफन्तजनसँग कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरा नोटिस गरिरहेका हुन्छन् । कुनै पुरुषले आफ्नो परिवार तथा साथीसंगीप्रति प्रेम, सद्भाव तथा आदर प्रदर्शित गरे भने उनीहरू प्रभावित हुन्छन्।